Ngubani omunye ongakwazi ukudweba amahlengethwa?
Kulesi sihloko, sizobe sibheka umkhuba wokudweba amahlengethwa. Mhlawumbe, akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi umuntu ofunde ukudweba, ukuziphatha kuyinto ebaluleke kakhulu. Futhi ukuqeqesha amakhono akho wekhono lobuciko kuyinto efiselekayo kwimidwebo elula. Ngakho-ke, namuhla sifunda ukudweba ihlengethwa, noma ubani angathanda ukuqonda lo mdwebo. Inqubo yokwakha lesi silwane esihle kunesici esisodwa - ukuba khona kwenani elikhulu lamigqa egelezayo. Yilokho okuyosisiza ukuba siqeqeshe futhi sandise amakhono ethu ekudwebeni.
Izinyathelo zokudala isithombe
Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo, Indlela yokudweba ihlengethwa, udinga ukuhlola ngokucophelela isakhiwo somzimba wesilwane sasolwandle. Kuzokwenza kube lula ukukhombisa imininingwane ebalulekile. Sliding ngokusebenzisa isithombe samahlengethwa, sithatha umdwebo.
Dweba umugqa wokuhamba
Okokuqala, udinga ukujwayela ukuhamba kwezilwane, ngoba yilokho okumele sikwenze. Kuyaziwa ukuthi abangane bethu basolwandle banomzimba oguquguqukayo kakhulu, ngakho kubalulekile ukugcizelela le mininingwane emdwebeni. Ngakho-ke, ukuze ubonise ukuhamba kwe-dolphin ukuhamba, kwanele ukudweba umugqa owodwa obushelelezi. Ngemuva kwalokho, udinga ukuthola isimo sezilwane esizayo. Kuphela ngokubhekana nalolu msebenzi, ungaqhubeka ngokuqondile nesithombe sezingxenye ezintathu ezintathu ezakha isisekelo somzimba weqhawe lethu.
Isinyathelo ngesinyathelo isithombe somzimba wehlengethwa
Ngakho-ke, sasiqhuba umgqa omkhulu. Siyaqhubeka siqonda ukuthi singadonsa kanjani amahlengethwa. Ake siqale ngomzimba wehlengethwa - iqukethe ama-curve amabili, ephansi, njengokungathi, igobile phezulu. Uma ukhuluma ngomzuzwana, kufanele utholakale ngenhla futhi uphakanyiswe phezulu. Kuphela ngokuphambene nesisekelo, ijika elingenhla kufanele libe ne-convex engaphezulu. Manje siyazi ukuthi embuzweni wokudweba amahlengethwa, isisekelo somdwebo sibalulekile.
Manje siqala ukudala amaphiko nomsila womngane wethu othandekayo. Ungakhohlwa ukuthi ukuphela okuphezulu kumele kudonsele eduze nendawo, kodwa kancane eduze kwekhanda, futhi lezi ezimbili eziphansi kumele zifakwe ngokushesha ngezansi. Ngokuqondene nomsila, kufanele ube usayizi omncane futhi ube nesimo esingunxantathu. Embuzweni wokudweba amahlengethwa, kubalulekile ukugcina ukulinganisela ukuze yonke imininingwane ibuke. Ngakho-ke ungenzi umsila omkhulu.
Ngemuva kokuthi sibhekane ngokugcwele nezingxenye eziyisisekelo zomzimba wehlengethwa, sekuyisikhathi sokuqhubeka nemininingwane eyengeziwe, okuyi-muzzle. Kungabonakaliswa njengoba kuboniswe kulesibalo, kodwa ungafaka ifantasy futhi udale isithombe esiyingqayizivele. Manje kusele ukulungisa umdwebo wethu. Ukuze senze lokhu, senza ukuma okungokoqobo okuvela emsila onxantathu. Sula i-eraser ngemigqa engadingekile.
Yilokho, ihlengethwa lethu lilungele. Noma kunjalo, isithombe singavuselelwa, engeza, uthi, amanothi endalo. Ukuthi isithombe sasijabulisa kakhulu, dweba ihlengethwa elizungezwe amagagasi olwandle, noma ubonise umkhumbi ongezansi ngemuva .
Ngenxa yomcabango, sizoqoqa isipiliyoni esinjalo sokudweba esisidingayo. Uma usafuna ukudweba kuhlanganiswe kuphela komlingisi wezilwandle, kunconywa ukuthi kulungiswe ipensela elula. Train, futhi uzophumelela!
I-Dummy tailor - idivayisi elula yokuthunga
Izakhi ezenziwe ngamatshe - ukubona amahle ngendlela evamile
Izeluleko ezimbalwa zokwenza izingqungquthela ezivela ezimbali nasemifino
Nutrition ezemidlalo amantombazane: babe bahle futhi unempilo! Proper ezemidlalo umsoco abesifazane
Iziphi izinzuzo has abahola impesheni sokuguga ngaphansi komthetho?
Indlela yokwenza isokhethi: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, idivayisi kanye nezincomo
Umanyolo "Radifarm": imfundo manual (ukubuyekezwa)
Ingabe uke wazama ugologo orange?
Kuyini ugwadule olukhulu kunazo zonke eNingizimu Melika? Omunye ezingwadule ngobukhulu emhlabeni ngo-Ningizimu Melika
Bendzhen Stark. Umlingisi Dzhozef Moul futhi ubuntu bakhe